हात्ती महोत्सबको पहिलो दिन लोक गायीका सम्झना मगरले उफारिन दर्शक – Nepaliko Aawaj
हात्ती महोत्सबको पहिलो दिन लोक गायीका सम्झना मगरले उफारिन दर्शक
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष १०, २०७६ | १९:१३:०६
चितवन । हात्ती महोत्सबको पहिलो दिन लोक गायीका सम्झना मगरले दर्शक उफारेकी छिन् । चितवनको सौराहामा पौष १० गते बिहिवार देखि सुरु भएको १६ औं चितवन हात्ती महोत्सबको पहिलो दिन चर्चीत लोक तथा दाहोरी गायीक सम्झना लामिछाने मगरले आफ्नो सांगेतिक प्रस्तती प्रस्तुत गरेकी हुन । उनले स्टेजमा गए पश्चात आफ्ना एक दर्जन भन्दा बढि चर्चीत गित गाएकी थिइन ।
गितसंगै उनले गायक कृष्ण भट्टराईको साथमा पानको पात भाकामा दोहोरी गित पनि प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
कार्यक्रममा गायक डि.वी. लोप्चन, नेत्रजी पन्त तथा राष्ट्रिय लोक दोहोरी गित प्रतिष्ठान नेपाल चितवन शाखाका कलाकारहरुले आफ्नो प्रस्तुती प्रस्तुत गरेका थिए ।
हात्ती महोत्सबका सांस्कृतिक संयोजक प्रकाश चन्द्र भट्टराईले महोत्सबमा हरेक दिन राष्ट्रिय तथा स्थानिय कलाकारहरुको प्रस्तुती रहने बताए । सोहि अनुरुप महोत्सबको दोश्रो दिन पौष ११ गते चर्चीक कलाकारहरु उमादेवी खनाल, तुलसी क्षेत्री, डि.बी. लोप्चन तथा राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल चितवन शाखाका कलाकारहरुले प्रस्तुती रहने भट्टराईले नेपालीको आवाज डटकमलाई जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका सह–संयोजक लोक गायक मिलन लामाले हरेक दिन आउने कलाकारले बिभिन्न बिधाका गितहरु प्रस्तुत गर्ने बताए ।
उनले हात्ती महोत्सब हेर्न र नया वर्षमा सौराहा घुम्न आउने पर्यटकलाई सांगेतिक माहोलमा झुम्ने वातावरण पनि बनाउनका लागि सांस्कृतिक पाटोलाई बलियो बनाइएको जानकारी दिए । हरेक दिन हुने कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमको रौनक बढाउन पनि गायक लामाले सबैलाई अनुरोध गरे ।
चितवनको सौराहामा फूड फेस्टिवल सुरु, बैशाख २ गतेसम्म सञ्चालन हुने
अर्किडको कफि हाउस।
रत्ननगर महोत्सव : विहीबार २० हजारले गरे अबलोकन